Maalinta: Abriil 6, 2018
Murashaxiinta ugu waaweyn iyo kuwa beddeli kara ee xaq u leh inay dhigtaan koorsada darawalka tareenka ee loo agaasimayo iyagoo la kaashanaya İŞKUR iyo TCDD Taşımacılık AŞ waxay ku qoran yihiin liiska ku lifaaqan. 10 ayaa tagi doona koorsada ka hor imtixaanka cilmu-nafsiga kaas oo bilaabmi doona Abriil 2018 [More ...]
Ku-xigeenka Maareynta Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, Orhan Birdal iyo Agaasimaha Guud ee TCDD İsa ApaydınEsme oo leh qadka tareenka xawaare sare leh ee u dhexeeya Izmir iyo Banaz, [More ...]
RayHaber 06.04.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Saadka iyo Kastamka ayaa la helayaa
Wuxuu noqonayaa mid saaxiibtinimo oo ka socda tartanka Inter-Agency Football Tournament under TCDD
Intii lagu guda jiray aqoon-isweydaarsiga tababarka ayaa loo habeeyey isku-dhafka TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo shaqaalaha TÜVASAŞ, waxaa la abaabulay tartan kubada cagta ah oo hay'adaha ka dhexeeya. Tababarka kadib, hayadaha waxay kaqeybgaleen tartankan oo lagu qabtay waqti bilaash ah kooxaha ay ka dhex abuureen shaqaalahooda. mid ka mid ah [More ...]
Hay'adaha dowliga ah ayaa shaqaaleysiinaya shaqaaleyaal si ay ugu gudbiyaan ogeysiiskooda cutubyadooda la xiriira. Maqaalka, waxaan ku soo uruurinay ogeysiisyada shaqaalaysiinta ee ay daabacday 3 hay'adaha dowliga ah ee kala duwan ee akhristayaashayada. Hay'adaha dowliga ah [More ...]
Cambodia - Tareenka Thailand dib loo furay 45 Years
1970 sano kadib burburkii dagaalkii sokeeye ee Kambodiya inta lagu gudajiray sannadihii 45, tareenka 48 kiiloo mitir ee isku xiraya magaalo madaxda Phnom Penh ee xadka Thai ayaa dib loo dhisay. Tareennada rakaabka ee Kambodiya ayaa dib u furmay shalay kadib muddo dheer [More ...]
soo saaray in Turkey, u bixiyey isticmaalka dadka Turkish, ka brand baska korontada marka hore BozankayaWaxaa kaqeybgalay Madasha Awooda Tamarta iyo Bandhigga lagu qabtay 9. 9 dalka Turkiga. waqtiyada la qabtay iyo sida af hayeenka magacyada khubarada [More ...]